China sy ny orinasa mpanamboatra gorodona multi-fampiasa | Jinqiu
Izy io dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ny karipetra, ny gorodona, ny fandefasana haingam-pandeha ambany ho an'ny karazan-gorodona isan-karazany ary ny fametahana ny vato ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, tranon'ny birao ary efitrano fampirantiana.
Fandidiana azo antoka kokoa sy famoahana herinaratra matanjaka omena.
Izy io dia manana fiasa marobe toy ny karipetra sy ny fanadiovana amin'ny gorodona, ny fanesorana ny savoka, ny polishing haingam-pandeha, ny kristaly, ny fitsaboana.
Item No. SC-002
Speed 175rpm / min
Lanja tsy afa-karatsaka 53.5kg
Tantano ny haben'ny fonosana 375X126X1133mm
Haben'ny fonosana lehibe 540X440X365mm
Color Manga, manga mainty, mena, fotsy
Accessories Vatana lehibe, tantana, fitoeran-drano, mpitazona pad, borosy mafy, borosy malefaka.
Ny masinina amin'ny multi-azo ampiasaina dia mora ampiasaina, azo antoka ary vokany fanadiovana tsara
Ny olana lehibe sy ny fomba famahana
TSIA. Olana Antony mety mahatonga ny lesoka Ahoana no hamahana
1 Ny motera tsy mihodina Ny tariby herinaratra dia tsy mifandray tsara.Fuse power tapaka, tapaka ny herinaratra.
Ny herinaratra dia simba
Zahao ny fifandraisana misy taribyZahao ny famatsian-jiro sy ny fuse
Soloy ny switch switch
2 Miadana ny fiandohan'ny motera Manomboka capacitorNivezivezy na simba
Switch switch sentrifugal
Soloy ny capacitor fanombohanaSoloy ny switch centrifugal
3 Malemy ny motera Run capacitor dia simbaSimba ny coil moto Soloy ny capacitor mihazakazaka
4 Tsy mijanona ny motera aorian'ny fanapahana ny herinaratra Ny herinaratra dia simba Soloy ny switch switch
5 Voahitsoka ny motera, tsy mandeha ny reducer na heno mafy ny feo Vaky ny vina planeta noho ny fiasan'ny be loatra tsy ara-dalàna Soloy ny fitaovana
Azontsika atao ny manome ny kojakoja rehetra an'ireny masinina ireny, toy ny visy, toy ny tanky, avelao ianao tsy hanana ahiahy mandritra ny fampiasana. Mbola tsy mahavaha ny olanao? Azafady mba mifandraisa aminay hamaly ny fanontanianao fa hamaly izahay.
Previous: Volon'ondry vy
Manaraka: Masinina fanasana borosy maro BD1A
15L / 32L / 45L lena maina vacuum madio kokoa BS-1020A 10 ...
15L / 30L / 60L / 80L Madio sy maina fanadiovana vakum LC1 ...